मेरो आँखामा आँशु मात्र हेर्न चाहने व्यक्तिलाई मेरो बिहेको निर्णयले पोल्नेछ :श्वेता खड्का « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
२२ मंसिर २०७७, सोमबार ००:००
नेपाली सिनेमाकी चर्ची अभिनेत्री श्वेता खड्काले आज दोस्रो पटक लगनगाँठो कस्दैँ छिन् ।उनको पहिलो विवाह श्रीकृष्णसँग भएको थियो तर उनको विवाह भएको एक महिनामै श्रीकृष्णको मृत्यु भएको थियो ।
लामो समय एकल जीवन विताएकी अभिनेत्रीले आज पुनःविवाह गर्न लागेकी छन् । उनले धनगढीका विजयेन्द्र सिहं रावतसँग लगनगाँठो कस्न लागेकी हुन् ।
हाम्रो मिडीयाँको तर्फबाट पनि अभिनेत्री खड्कालाई बैवाहिक जीवनको शुभकामना दिन चाहान्छौ । उनले आफ्नो विवाह हुनु भन्दा अगाडी एक मन छुने स्टाटस सियर गरेकी छन् ।
जसमा आफ्नो जीवनको दुस्खद अध्याय बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमाा पुगेको बताएकी छन्।
श्वेताले थप लेखेकी छन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवश्य छ! के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णय स्वीकार गर्ला ररु मलाई थाहा छ, श्वेताको आँखामा आँशु मात्रै देखिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेका दुई चार जना व्यक्तिहरूलाई मेरो यो निर्णयले पोल्नेछ।’
‘म जीवनको दुस्खद अध्याय बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा पुगेकी छु,’ उनले बिहेको पूर्वसन्ध्यामा, आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छन्, ‘त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अतीतलाई चटक्कै भुल्छु भनेको भने पक्कै होइन। अतीतका मीठा पलहरूलाई मनको कुनामा पोको पारी भविष्य सजाउने नवीन यात्रा थालनी गर्ने यो निर्णय लिनु म एक्लैका लागि सहज र सम्भव छँदै थिएन।’
म : जीवनको नवीन यात्रामा।
जीवनका विभिन्न आरोह-अवरोह, उकाली-ओराली, सुख-दुस्ख अनि हाँसो-रोदनका पललाई आत्मसात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आइपुगेकी छु।
जिन्दगीको यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले जे-जस्ता पीर, व्यथा, दुस्ख अनि कष्टसँग सामना गरेकी छु, त्यसभित्रको कहालीलाग्दो अनुभवहरूलाई शब्दमा बयान गर्न पनि असमर्थ छु।
मैले मृत्‍युलाई रोजिनँ, जीवनलाई नै रोजेँ। अनि जिन्दगीका हरेक समस्याहरूसँग जुध्दै क्रमशस् अगाडि बढ्दै गएँ।
‘के म यसो गर्न सकुँला ररु’ आफैंसँग प्रश्न गर्थेँ। आफ्नै प्रश्नमा आफैंले उत्तर दिन्थेँ, कि हुत्ती हारेर मर्नु पर्छ कि त हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’
अतस् मैले मृत्‍युलाई रोजिनँ, जीवनलाई नै रोजेँ। अनि जिन्दगीका हरेक समस्याहरूसँग जुध्दै क्रमशस् अगाडि बढ्दै गएँ।
‘अब उठ्नै सक्दिनँ कि’ भन्ने कमजोर भावले थिचेको त्यो बेलामा आफ्नो हात समातेर उठाइदिने कुनै सहाराको आशा हुँदो रहेछ।
महिनैपिच्छे करिब हप्ता दिनका लागि बिरामीको अवस्थामा पुग्ने मेरो शरीरले एक गिलास पानीसँगै औषधिको ट्याब्लेट मुखमा हालिदिने एउटा सहयोगको चाह हुँदो रहेछ।
मनभित्र गाँठो परेर बसेका अव्यक्त वहहरूलाई बोकेर हिँड्नु भनेको हजार टनको पत्थरलाई टाउकोमाथि बोकेर हिँड्नुभन्दा पनि कठिन रहेछ। तर मैले मेरा बहहरू व्यक्त गर्ने कोसँगरु
मैले साथीसंगतीहरूको भिडमा आँखा डुलाएर हेरेँ, तर मेरो पीडालाई महसुश गर्न सक्ने कोही देखिनँ। आफन्तको घेरामा खोजेँ तर माइतीमा शरण लिएर बसेको म एकल नारीले आफ्नो पीडा पोखेर माइतीलाई थप तनाव दिनु हुन्न भन्ने मनन गरेँ। अतस् मेरो हरेक दुस्खमा म एक्लै रोएँ, पीडाहरुमा आफैं सम्हालिएँ अनि अनेकन समस्याहरूसँग एक्लै जुधिरहेँ।
अनि विगतमा मैले गुमाएको मेरो चोखो मायालाई पुनस् फर्काएर मेरो जीवनमा खुसीको रङ भरिदिने कुनै दयालु मन पाइएला र? लौ, भनेको जस्तो निःस्वार्थी, स्वच्छ र निष्कपटी व्यक्ति पनि पाइयो रे। अनि के यो पुरूष प्रधान समाजले मेरो दोश्रो जीवनलाई स्वीकार गर्ला ररु’ म मेरा हितैषीलाई प्रश्न गर्थेँ।
आज, मैले मेरो एकल जीवनमा एउटा सहयात्री पाएकी छु। विगतको पीडालाई भुलाउने एउटा बहाना पाएकी छु। मेरो अतीतलाई सहर्ष स्वीकार गरी मसँगै सुख र दुस्ख बाँड्न तयार एउटा साथी पाएकी छु।
म, जीवनको दुस्खद अध्यायलाई बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा पुगेकी छु।
तर मप्रति साहनुभूति राख्ने, मलाई सदैव खुसी देख्न चाहने अनि सधैं मेरो सफलताको कामना गर्ने लाखौं शुभचिन्तकहरूको आशीर्वाद, सद्भाव र सुभेक्षाले मप्रति रिस र इर्ष्याको सोच राख्ने दुई(चार जनाले स्वतस् हार खानेछन्।
अतस् कोरोना सन्त्रासका बीच जुरेको खुसीको माहौलमा मैले मेरा धेरै मित्रहरू, गन्यमान्य व्यक्तित्वहरू, संचारकर्मीहरू लगायत मेरा आफन्तहरू समेतलाई सामेल गराउन असमर्थ हुनेछु।
प्रकाशित मिति: Dec 7, 2020